Baasaaboor yar - Migrationsverket
Resedokument – somaliska
Si laguu siiyo baasaaboorka yar waa inaa adiga ahaataa qaxootiga la aqoonsanyahay sida uu dhigaayo wada heshiiskii caalamiga ee Geneva sanadkii 1951 ama ahaataa jinsiyad la’aan iyo buuxisid shuruudii heshiiskii caalamiga ee New York sanadkii 1954.
Soo codsashada oo baasaaboorka yar
Adiga haddii aad soo codsaneysid baasaaboorka yar waxaa soo buuxin foomka Codsashada baasaaboorka yar, oo lambarka foomka 108021[Ansökan om resedokument, nr 108021], iyo waa in adiga shakhsiyan soo booqataa oo keenta xafisyada Hey’adda socdaalka oo oggolanshada bixiyo midkood. Inta aadan adiga soo booqan Hey’adda socdaalka sidaa codsigaada u soo gudbisid, waa inaa koow wakhti ballan suubsato. Adiga waa in wakhti ballan u suubisid shakhsikasto oo doonaayo inuu codsado baasaaboorka yar, iyo shakhsikasto waa inuu soo buuxiyaa foomka codsiga.
Inta ka sii akhriso sida la suubiyo marka la codsanaayo baasaaboorka yar
Carruurta da’doodu ka yar tahay 18 sano keliyood ma codsankaraan baasaaboorka yar. Canuga qofka mas’uulka ka ah ama qofka mas’uulka looga dhigay baa shakhsiyan u soo codsankaro baasaaboorka yar canugaas.
Haddii canugu uu leeyahay labo mas’uul waa khasab in labada waalid ay ansaxiyaan codsiga oo ey soo wada saxiixaan codsiga foomka canuga. Haddii labada mas’uul mid ka mid ahi uu u soo raacayo Hey’adda socdaalka canuga oo keenayo codsiga waxaa khasab ah in mas’uulka kale uu soo saxiixo foomka codsiga. Saxiixaasna waxaa khasab ah in qof saddexaad uu markhaati ka yahay.
Carruurta oo labadiisa waalid joogin Iswiidhan waa khasab inuu la socdo qofka mas’uulka looga dhigay marka uu codsiga keenayo Hey’adda socdaalka.
Soo codsashada baasaaboorka yar waa lacag la’aan, laakin adiga waa inaa lacag bixisid markaa soo doonaneysid baasaaboorka yar. Adiga kharashkaas waxaa ku bixin kaar markaa imaatid Hey’adda socdaalka oo soo doonaneysid baasaaboorka yar.
Inta baa ka sii akhrisankarta iminka la joogo wakhtiga ey qaadaneyso ka shaqeynta codsiyada oo baasaaboorka yar
Ku safar baasaaboorka yar
Baasaaboorka yari wuu buuxin shuruudaha Midwooga yurub oo arrimaha baasaaboorada iyo dhammaan wadamada oo dhan waa loogu safari kara. Laakiin haddii aad tahay qof qoxootinimo loo ictiraafay sida uu dhigayo heshiiska caalamiga ah ee Geneve sanadkii 1951 waxa lagu qoridoonaa inaanad ku tegi karaynin waddankaagii ama waddankii aad ka soo qaxday.
Haddii adiga aadan caddeynkarin shakhsiga aad tahay weey ku qornaan baasaaboorka yar in la caddeyn shakhsiga aad tahay, oo taasna waxey adkeen kartaa in wadamada qaarkood aad u safarto.
Wadamada qaarkood waxaa dhici karto inaad u baahantahay fiiso. La xiriir wadankaas safaaradiisa sidaa warbixin kale u heshid inta aadan safrin.
Ilaa intee buu baasaaboorka yar ansaxsanaan
Baasaaboorka yar wuxuu ansaxsanaan caadiyan shan sano iyo ma’ahan suurtagal in wakhtigiisa la dheereeyo. Haddii aad u baahantahay baasaaboorka yar markey dhammaato muddadii uu ansaxsanaa adiga waxaa soo codsan mid cusub oo baasaaboorka yar.
Markaa soo codsaneysid baasaaboorka yar waa khasab in adiga markale lagu sawiro iyo farahaada la sawiro, maadaama sawirkaada iyo farahaada eysan ku keedsaneen Hey’adda socdaalka, kaliya ku keedsanyahiin elektaroonig ahaan baasaaboorka yar.
Haddii baasaboorkaada yar kaa lumo
Haddii baasaboorka yar kaa lumo ama adiga lagaa xado, adiga waa inaa koow dacwo boliis suubsatid. Haddii aad u baahantahay mid cusub oo baasaboorka yar waa qasab in adiga codsi cusub soo suubsatid. Horey usoo qaado kobi dacwada boliiska oo adiga bostada laguugu soo diray ama xafiiska boliiska ku siiyeen marka aad noo imaaneysid sidaa u dalbatid mid cusub oo baasakoorka yar.
Haddii Hey’adda socdaalka diidmo kaa siiso codsigaaga oo baasaaboorka yar rafcaan ayaad ka qadan kartaa go’aankaas. Rafcaankaada waa inuu soo gaaraa Hey’adda socdaalka saddex isbuuc gudahooda, laga soo bilaabo maalinta go’aanka ku soo gaaray.